पुलिस चौकीमा ढेंडु बाँदरलाई जागिर !
December 19, 2017 admin	0 Comments
भारतको आगरा पुलिस अधिक्षक कार्यालयमा हालै एक ढेँडु बाँदरलाई तैनाथ गरिएको छ । वास्तवमा आगराको कलेक्ट्रेड अफिसमा बाँदरको आतंक निकै बढेको थियो । सोही कारण डिएम, एसएसपी कार्यालयलगायत अन्य कार्यालयको काम पनि प्रभावित भैरहेको थियो । बाँदरले अफिसका फाइलसमेत चोर्न थालेको थियो । फलस्वरुप आगराका एसएसपी अमित पाठकले एसएसपी कार्यालयमा लंगूर बाँदर तैथान गर्न आदेश दिए ।
त्यसपछि पुलिस कार्यालयमा एक लंगूर अर्थात् ढेंडुलाई नियुक्ति गरियो र बाँदर भगाउने प्रशिक्षण दिइयो । ढेंगुलाई नियुक्त गरी पुलिस कार्यालयमा तैनाथ गरेपछि त्यहाँ बादर आतंक रोकिएको छ । ढेंडुसँग डराएर त्यहाँ बादर आउन कम भएको छ ।यसअघि विश्वको सबैभन्दा ठूलो सर्च इन्जिन कम्पनी गुगलको मूख्यालयमा बाख्रालाई भर्ना गरेर चौरमा पलाएको घाँस खाने जागिर दिइएको समाचार आएको थियो ।
गुगलको कार्यालयमा २ सयवटा बाख्रा कर्मचारी छन् । बाख्राले तलब पाउँछन् । गुगलले आफ्नो कार्यालय परिसरमा रहेको घाँस काट्नका लागि मेसिन प्रयोग गर्दैन किनकि घाँस काट्ने मेसिन प्रयोग गर्दा धुँवा तथा आवाज निस्किन्छ र त्यसले वातावरण प्रदूषित गराउँदछ ।
← दुनियामा सबैभन्दा पहिले कसलाई भएको थियो एड्स ?
बाबुआमासँग वर्ण नमिलेपछि छोरीले गर्ने भइन् डीएनए परीक्षण →